Ihe oyiyi izizi nke Pixel 3 adịlarị mbụ | Gam akporosis
Weghaara ihe osise mbụ nke Google Pixel 3
Edere Ferreno | | Mobiles
N'ime izu atọ a ga-egosipụta Google Pixel 3 n'ihu ọha. Ihe omume a ga-eme ma na America ma na Europe, na nke a na Paris, na October 9. Companylọ ọrụ ahụ na-achọ ịnwe ọnụnọ ka mma na ụdị ndị a na mpaghara Europe, ebe ọ bụ na nkesa abụghị nke kachasị mma n'ọgbọ ndị gara aga. E ji ọgbụgba a mara ọtụtụ ọgbọ a.
Ihe na - eme ọzọ ugbu a, ebe ọ bụ na agbapụla onyonyo izizi izizi nke Google Pixel 3. Ọ bụ ya mere e ji kwado atụmatụ ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ America. Onweghi ihe ijuanya na nke a.
Ebe ọ bụ na a kwadoro atụmatụ nke ụdị abụọ ahụ, nke anyị hụrụ n'izu ndị a gara aga. Ma ọ dịkarịa ala ọ na-enye udo nke uche ma kwesịrị inye aka kwụsị ụfọdụ asịrị ndị bilitere banyere ekwentị abụọ ndị a sitere na ụlọ ọrụ ahụ.
Dị ka e kwuru na izu ndị a, ihe Pixel 3 XL ga-eji ọkwa ahụ na ihuenyo gị. Ọdịdị dị ịrịba ama, nke kachasị mma na ya. Ihe omuma nke adighi eme ka otutu ndi oru kwenye, ya na ihe iju anya mgbe Google gharichara nke iPhone X ichota otu afo gara aga.
Nhazi nke Pixel 3 yiri ụdị nke afọ gara aga. Nzọ na ihuenyo na okpokolo agba, na-enweghị ọkwa, na enyemaka nke ọtụtụ. Nakwa dị ka ndị kwesiri ngosi karịa ekwentị ọzọ. Ekwentị abụọ nwere otu igwefoto azụ, nke a na-atụ anya ime ka ọ dịkwuo mma.
Enwetụbeghị mgbe anyị nwere ọtụtụ nkwupụta banyere ekwentị tupu ịmalite. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị maara ọtụtụ ihe banyere Pixel 3 ọhụrụ a, ọkachasị gbasara ụdị XL, nke bụ nke tara ahụhụ kachasị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Weghaara ihe osise mbụ nke Google Pixel 3
Xiaomi CEO kwadoro ụdị abụọ nke Mi 8 Youth na grajentị
Samsung Galaxy J4 + na Galaxy J6 + bụ ndị ọchịchị